Mee Polygon nke dabere na biarin na ebe dị anya na tebụl Excel - Geofumadas
Mee Polygon dabeere na ntụziaka ma dị anya na table Excel
Septemba, 2008 AutoCAD-AutoDesk, downloads, Microstation-Bentley, topografia
Ka anyị lee ihe isi okwu a bụ:
Enwere m data nke na-agagharị na bearings na anya, na achọrọ m iwu ya na AutoCAD ma ọ bụ Microstation. Anyị hụrụ na mbụ AutoCAD o nwere ọdịdị ya iji zụọ ụdị data a n'okpuru usoro @dist <mgbe ọ dị na Microstation ka emechara ya site na AccuDraw.
Ọfọn, n'ịzaghachi enyi anyị James, lee tebụl:
1. Ntinye data
A na-abanye n'ime mpaghara edo edo, ebe ị na-abanye na ọdụ, anya na isi dị ka ihe atụ.
2. Nhazi mbu
Nke a dị n'isi nke mpaghara ahụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-eche na anyị maara nhazi nke isi ihe mbụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ya, tinye uru ọ bụla, ọkacha mma ka ọ ghara ịhazi nchịkọta na-adịghị mma, dịka 5,000 (puku ise)
3. Ihe mmepụta data
Nke a bụ mpaghara akara na oroma, ebe ihe ị nwere bụ nchịkọta x na nkwekọrịta na nkeji nkewa.
4. Otu esi eziga ya na AutoCAD.
Dị mfe, "oyiri" na-eme na mpaghara oroma nke faịlụ kachasị, mgbe ahụ na AutoCAD a na-arụ ọrụ iwu polyline (pline) ma "mado" na-eme na mmanya iwu. Nsonaazụ a na-adọta travers naanị iji nye njedebe
N'ebe a ị nwere ike ibudata template iji wuo polygons dabere na bia na ebe dị anya na teepu Excel.
Ọ chọrọ onyinye ihe atụ maka nbudata, nke ị nwere ike iji ya Kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ Paypal.
5. Otu esi eziga ya na Microstation
Iji mee ya na Microstation M kere template nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ, ma n'echiche nke Microstation Key-in command.
Lee template maka Microstation.
Previous Post«Previous Tinye data na bearings na anya na Microstation
Next Post Topological Analysis na Microstation GeographicsNext »
56 Azịza ya "rụọ Polygon dabere na ntinye na ogologo na tebụl Excel"
June, 2018 na
Lelee email gị, ọbụna ndị na-achọghị, na-abịa vidio url.
Ugbu a na-etinye onyinye, olee otu m ga-esi budata faịlụ ahụ?
Mgbe ahụ ị ga-eme ya na PayPal.
Anstacio Montoya kwuru, sị:
ndewo n'ehihie enweghị m ike ibughari ya n'ihi enweghị adresị ụlọ ọrụ ebe m ga-ekele gị
El isiokwu njikọ egosi nhọrọ nke ugwo site na mbufe ego,
Emeghị m ya. Ọ bụrụ na egosighi, jiri F5 mee ka ọ dị jụụ.
Obi ụtọ abalị dị ka ugwo site na ịnyefe ma ọ bụrụ na m na-eme ya na ụlọ akụ nke aha akaụntụ m na-enye ekele ekele m nwere mmasị
Lelee ozi gị, mgbe ụfọdụ ọ na-aga spam.
Ị ga-enweta ozi yana url download, nke ga-agwụ na ụbọchị 4.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, gwa anyị editọ (na) geofumadas.com
Alex Mor kwuru, sị:
Emere m ụgwọ site na paypal. Ebee ka m nwere ike ibudata template ahụ?
Eduardo Henriquez kwuru, sị:
Achọrọ m ịgwa gị ka izipu ego site na Pay Pal na aha gị maka ụdị Excel
Arturo Salinas kwuru, sị:
Ọ dị mma, iji wuo ArcGIS cogo ka eji
Ị ga-eji ntinye aka na Excel, ma jiri Ebe Line.
Wee tinye ya na txt faịlụ wee kpọọ ya na Keyin
N'isiokwu a, anyị na-akọwa otú.
cmv kwuru, sị:
Na-ekele mmadụ niile na ekele maka ezigbo ọrụ a.
Enwere m ajụjụ
Kedu ka m ga - esi mee MICROSTATION ka m wee ghara ịhapụ ígwé ígwé ojii kamakwa ihe ndị ga - eme ka polygonal ahụ dịrị?
swiiti kwuru, sị:
Magburu onwe gị nke ọma! Ị zọpụta!
N'okwu a ọzọ, edepụtawo m ụzọ ọzọ iji jiri Microstation mee ihe, site na iji ntinye ọnụ na Excel ma ọ bụghị faịlụ txt
da kwuru, sị:
Onye ọ bụla maara otú esi tinye data niile ozugbo?
N'eziokwu, ọ nwere ike ịrụ ọrụ maka usoro ọ bụla nke na-anabata nhazi na usoro ahụ.
Eleghị anya enwere ndapụta maka ArcGIS, ma anaghị m ekwu okwu banyere okwu a ebe a.
Nkume kwuru, sị:
Hello, naanị m zọpụta ndụ na nke a post, m mkpa iji mee ka a polygon na ArcGIS otú iji usoro a na naanị dabara maka ArcMap, ọ bụghị ma ọ bụrụ na e nwere onye na-adị mfe ụzọ ime nke a omume ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ama bipụtara ụfọdụ biputere banyere nke a, ma hey nyeere m ezigbo aka, ọ ga-adị mma na-na-na-etinye post laara ArcGIS. N'ikpeazụ, ekele gị nke ukwuu !!! ekele na ibe a, hellooooos.
Willy kwuru, sị:
Maka enyemaka, ugbu a ma ọ bụrụ na ekpe polygon ahụ… ^ _ ^
Na ị gbanwere ya na Windows
Malite, nchịkwa nchịkwa, mpaghara
Yabụzie, ị ga - ahọrọ obodo ebe ịnọ ma nke a ị ga - enwe akara ziri ezi na commas na ebe isi awọ, n'okpuru ebe ihe atụ dị. Nke mbu bu onu ogugu.
Ọ bụrụ na-egosi na ezighi ezi, ọbụlagodi ịhọrọ obodo gị, pịa pịa "hazie" bọtịnụ ebe ahụ gbanwee ụdị akara akara akara na puku akara akara.
Enwere m nsogbu iji nweta nbịachị, nsogbu ahụ na-apụta na ndị na-esonụ.
Nsogbu dị na tebụl mpempe akwụkwọ nke ọfịs m na-achọ ịma otú m ga - esi gbanwee akara ahụ (,) site na Point (.) Enwere m ọrụ 2007.
O yiri ka m na-esote:
ebe enwere oge (.) enwere (,) nyere m aka.
Efferrari kwuru, sị:
October, 2010 na
Ndewo, m nwere ọtụtụ afọ nke iji MicroStation maka cadastre ma achọrọ m ịtinye na onyinye kachasị mma nke ndị ọrụ ibe na ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbakwunye na mgbakwunye na polygon, usoro ahụ dị nnọọ mfe. Na mpempe txt nke isi, anyị na-ede "ebe smartline", na nhazi ọ bụla anyị na-etinye nhazi xy = x, y ga - ahazi. ya mere mmadụ niile. Na ntinye Key-anyị anyị dee @C: \_ aha na ọnọdụ nke file.txt Nke ahụ bụ echiche nke usoro ahụ ma ọ bụrụ na mmadụ maara usoro ọzọ ga-enwe ekele maka ntinye ahụ.
N'ezie, usoro ahụ bụ X-Y
Francisco Hernandez Barron kwuru, sị:
Achọrọ m ịme atụmatụ na autocad .. n'ihi na m na-abanye nhazi na x na m na-agba ụgbọelu ahụ
Ivan kwuru, sị:
Nwanna ekele maka enyemaka, ana m echekwa ọtụtụ ọrụ na okpokoro a, ekele maka mmepe nke usoro, ezigbo ọrụ.
Juan Luis Córdova kwuru, sị:
Ahụghị m v8i
v8 xm mbipụta
Kedu ụdị ị nwere?
V8 ma ọ bụ V8i
Kedu maka, enwere m ebe nrụọrụ microstation, amaghị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka na usoro ma gbalịa ntakịrị mana ọ nwere ọtụtụ ngwaọrụ.
Enwere m ekele maka ya.
Ọ dị mma na nwa okorobịa na-achọ ebe a na-ekwu okwu na nkwonkwo na nwata
Iji mee ka okpokoro nke dị anya na ebe dị anya na-etinye ebe Microstation, dị ka ị nwere ike ime ya naanị na AutoCAD mana ndị ọrụ obodo.
Mana i nwere ike ime usoro nke a ya na table a
Ọfọn m na-ahụ ya na-akpali, ka ị na-edozi, m nwere nsogbu m nwere ike ghara inwe a igbe na-ewu (biarin na anya) nke a polygonal na realizadaen MicroStation v8 XM ma ọ bụ v8i, dị ka a na-eme na Civilcad naanị tebas ngwá ọrụ polygon na-enye ịmepụta eserese na-esere ihe na ntaneti n'ime ntaneti ma ọ bụ ihe oyiyi, ha ga-awakpo ha ga-enyere m aka
Ahụtụbeghị m ihe na-eme nke ahụ, nke nwere ike inyere gị aka bụ nke a . Koodu enweghi paswọọdụ, yabụ ị gbanwee ya nke mere na ọ ga - enye gị ozi ndị ọzọ, ma ọ bụ hapụ ya na kọlụm ọrụ nke ejiri ọrụ mechie.
FAVIANO kwuru, sị:
Enwere m ekele, ma echere m na m kwesịrị ịkọwa ihe, Achọrọ m izere iji aka na-eme ya, nke a na-eji egbugbere ọnụ emepụta ya, na m na-edepụta data ịbịnye faịlụ ahụ.
Ọfọn, m ghọtara na ọ bụrụ na ọ bụ naanị akara ahụ, ị ​​na - eme:
- Iwu iwu
wee tinye data na ụkwụ dịka ederede.
M NA-ENWE KWESỊRỊ KWESỊRỊ ỤBỌDỤ Q BỤ N'ỤLỌ NCHE A NA-EME. ỌMA chọrọ ịmata ma ọ bụrụ na m nwere ike inyere graphed A data Excel AUTOCAD, ME BỊARUO A na akara na ALL OZI ID, achịkọta TOP OF akara, Ogologo, Azimuth na nchepụta (gụnyere) si XY ụgbọelu.
MGBE Ị GA-ENYE NA-AGBA IME.
NJ KA MARA ELEVATION DARA. »« AZIMUT »« INCL. »
Aha. Hugo Alarcón kwuru, sị:
Ana m ekele gị, ọ bụ ibe magburu onwe ya yana karịa ihe niile nwere ọtụtụ ozi bara ezigbo uru maka anyị bụ ndị raara onwe anyị nye ọdịdị na usoro a ...
Anọ m na-enyocha ihe ọmụma ị nwere banyere iji ihe gbasara ala (ma ọ bụ gedesics) na UTM ... Ana m agbasi mbọ ike na mgbanwe nke Geographies na Topographic, ya bụ, Achọrọ m ịgbanwe site na geodesics gaa na mbara igwe, n'ụzọ dị otú ahụ isi ihe ma obu uzo anyi tinyere ma mee usoro nhazi, anyi nwere ike iji ha na onu ogugu ma obu ihe omuma obula na uzo di anya ma obu mechie ... ihe gi gha enyere aka ... ekele na ekele sitere na tampico, tamaulipas, mexico ...
na nkwekọrịta dị na ala ma ọ bụ na-arụ ọrụ?
jeijchang kwuru, sị:
Ezigbo ndị enyi m chọrọ ịma ma ị nwere ike inyere m aka ka m nwere ike iji aka gị nyefe nhazi site na gps ruo n'ochichi
Ọ bụrụ na ọ bụ, ma eleghị anya, ọ ga-abụ ịlele na panel ahụ, mpaghara, ma hụ ma ọ bụrụ na commas dị ka puku ndị na-ekewapụ na njedebe.
josue kwuru, sị:
ị maara na m chere na nsogbu ahụ dị na nhazi komas na oge…. site na Excel
ahhhhhhhh ezigbo peeji huh ...
mma daalụ, ihe niile mechara jiri nwayọ….
I mejọrọ ihe kpatara ya bụ mgbe ị na-edegharị data na ezighi ezi ... ọtụtụ puku ekele ...
Lelee usoro nke ihe ị na-eme:
Iwu akara (ma ọ bụ akara)
Ịhọrọ mpaghara na excel
Pịa na akara nke AutoCAD
Joshua kwuru, sị:
Emeghị m ihe ọjọọ ịkụ data dị mma, ihe na-eme, ah Enwere m usoro ọzọ na Excel nke bara uru nke ukwuu itinye ihe na Pọtụfoliyo yiri ụdị a mana na ọnọdụ abụọ m na-enweta ozi a 2d isi ma ọ bụ nhọrọ isiokwu chọrọ " mgbe m gara ala Autodesk, Aghọtaghị m?
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgafe usoro dị na Excel naanị dee email gị….
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị.
Aaa Ọ B IFR YOU NA IHE Ngwọta a nsogbu, Gbasaa okwu a….
Enwere m usoro ọzọ yiri nke a, ọ bụ ịmegharị okporo ụzọ ma gaa ala autodesk. Ọ dị yitere ụdị a, enweelarị m usoro m nwere ma ọ rụ ọrụ nke ọma maka m wee nweta ozi ahụ "isi 2d ma ọ bụ nhọrọ isiokwu chọrọ" na polygon m adighi aputa, adighi m emehie na i copomi data. Ọ B IFR YOU NA WAN chọọ ịgafe na Excel, dee ozi ịntanetị gị …….
AAA BIKO Ọ B IFR YOU Ọ B HAVER AL FB FR THE THEB THER,, GAA N'ỌD VO AHICE, Amaghị m ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ AUTO CAD Nhazi ma ọ bụ ihe na-adabaghị na EXCEL….
Joshua, Ekwenyere m na ị na-edegharị ebe na-ezighị ezi, ị ghaghị idetu ihe akara na oma
Isi okwu 2d ma obu okwu a choro choputakwara m na enweghi m ike ichota ya ma oburu na imara ya, biko nyere m aka, o bu ososo, biko …….
jcpescotosb kwuru, sị:
Ezigbo faịlụ ga-ejere m ozi nke ukwuu ma ana m ajụrịrị ihe m na-ajụ maka etu esi gbanwee ngalaba okporo ụzọ na ọkwa na UTM…. Aga m anwale ya maka imeghe emeghe
Ọ ga-ekwe omume ịnwe comma na usoro ntụpọ adịghị mma, a ga-enyocha nke a na njikwa akara, ntọala mpaghara. Ọ ga - arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịnwere isi ihe dị ka nkewa nke decimim na commas dị ka nkewapụ puku.
gemasa kwuru, sị:
Enwere m ule ahụ na Autocad 2009 ma ọ rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụghị microstation
Ọ ga-abụ na adịghị m eme ihe ziri ezi na ụfọdụ Microstation V8 xm.
1. Iwu Polyline
2. ị dee 0,0
4. bido n'ime ogbe oroma nke akwukwo nke oma
5. pịa akara iwu
6. pasta ma ọ bụ ctrl + v
7. rụọ ọrụ zuru ezu anya mbugharị
Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, ihe dị omimi dị anyị nso. Nhọrọ ọzọ nke nwere ike ịmetụta bụ commas na oge gị na-agbaghasị na nkewa nke puku kwuru puku.
iris kwuru, sị:
GỊNỊ BỤRỤ NA M Kwesịrị Ịbịanye Mkpụrụ Obi na AUCTOCAD.
MGBE MARA OPBOPR TH MGBE M aga ma họrọ POLILINE Mpempe akwụkwọ 0,0 NA PEB SPP SPR THE AKW THEKWỌ AKW FKWỌ AKW APKWỌ AKWPEKWỌ AKW [KWỌ A- Arc / Halfwidth / Ogologo / Wepu / Wepụta
AKA M EZI OMISO MARA NA PEGO KWESIRI AKW THISKWỌ A (2D isi ma ọ bụ isiokwu nhọrọ achọrọ) Amaghị m otu m ga-esi kwụsị ọrụ POLYGON, M GHARA KNOWmata Ọ B YOUR YOU na CAN nwere ike inyere m aka.
René, nchịkọta na-apụta n'ihi na anyị ewerela nhazi mbụ.
RENE FABRICIO CASTRO kwuru, sị:
Echere m na site na ntụziaka ndị a, anyị agaghị enwe ike ịhazi njikwa n'ihi na ntụziaka ndị ahụ abụghị ntụpọ ala. nnukwu onyinye iji kewaa nhazi na ngwugwu
En nke a anyị hụrụ otú e si eme ya n'ụzọ ọzọ, na-amalite site na isi ihe.
Ricardo kwuru, sị:
Akwụkwọ dị mma nke ukwuu, enwere ike ịme ya site na polygon iji mee tebụl na Rumbos, Azimuth, Distance, Azimuths nwere ntọala ama ama?